I-Tour Station yaseDarjeeling Hills Incwadi yeDarjeeling Holiday Holidays
IDurjeeling Hill Station Tour
| Ikhowudi yoKhenketho: 120
Omnye phakathi koodade abasixhenxe baseNorth East India, iSikkim Gangtok kunye neHajey hob hub Darjeeling kunye nezitropu zayo ezintle zeentaba ngaphandle kokungabaza zinokubangela abavakhenkethi. Eyilwe ngendalo, i-tour ye-tour ye-station ye-Darjeeling izakuvuselela ngokuqinisekileyo abakhenkethi ngexesha lehlobo. Kukho iiPakethe zeTurjeeling zeTurjeeling ezikhoyo kunye neDarjeeling Gangtok Tour.
Ukunyuka kwi-Bagdogra Airport / Isikhululo seSitishi seSitimela saseNew Jalpaiguri Ukuya kwi-Gangtok (i-125 kms / i-4.5 hrs). Isango eSikimim. Ukugqithiswa kwee-Ranges ze-Himalayan, i-Gangtok yiSixeko esihle. UbuBuddha yinkolo enkulu kule ndawo. Ukutshintshela kwihotele. Ukuphumla komhla wokuzonwabisa. Ubusuku bokuhlala e-GANGTOK.
Emva kwesidlo sasekuseni Ukuhambela kwendawo kwiSiko seTibetology, i-studio yaseDordul Chholten, i-Monumtery yaseRumtek, iRopeway Ride kunye ne-Shanti indawo yokujonga. Ubusuku bokuhlala e-GANGTOK.
Emva kwesidlo sasekuseni, Ukuqhutyelwa kweLake Lake kunye neBad Mandir ekuphakameni kweenyawo ze-13,500. (Ukuba kunjalo, i-Tsangu lake ayifumanekanga ngenxa yeemeko zemozulu ezibi, siya kutyelela uNamachi, okuthetha ukuba "iNkulu ephezulu". yentlambo) kwaye ubuyele kwiGangtok. Ubusuku bokuhlala e-GANGTOK.
Emva kokuhlwa kwasekuseni Ukuya eDarjeeling (i-130 kms / i-4 hrs), ehlala kwiNyakatho yaseBangla ishiywa yii-Himalayan Ranges kwaye ijikelezwe yiIijaji zeeTyi. Xa ufika, Tshintshela kwihotele. Ukuphumla komhla kukuzonwabisa. Ubusuku buhlala eDARJEELING.
Ukutyelela kweTamer kwiNtaba yaseMangcwaba ukuqala ukukhanya kwelanga kwiintshaba zaseKhananjanjunga, ukuvakatyelela i-En-route ebizwa ngokuba yi-Ghoom Monastery kunye ne-Batasia loop. Emva kwesidlo sasekuseni uhambele i-Himalayan Mountaineering Institute, i-Himalayan Zoo, iTempile yaseJapan, igadi yeRandi, iParkamaiya kunye ne-Tibetan Handicraft Centre, kwi-In-road uza kuba nombono obalaseleyo kwiiJadi zeDaijeeling. Ubusuku buhlala eDARJEELING.
Emva kwesidlo sasekuseni Ukuya e-Bagdogra Airport / Isikhululo seSitishi saseKapa sase-Jalpaiguri (ii-96 kms / 3 hrs) ukuya phambili. I-en-ityelelo Ukutyelela i-Pasupati Market (Nepal Border) kunye ne-Mirik Ichibi (uLwandle oluNxweme olujikelezwe yiMithala neMithi yePine). Ugqomo ugqiba.
Ayikho i-Popups elayishiwe?